Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "Pope", iqabane iimvakalelo?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "Pope", iqabane iimvakalelo?
Pope nguwe kwiziko le "Pope 'endleleni
Pope get ziphicothwa 3500 yen mahala entsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa kwi ikhadi kwindawo umva, abantu ababini abefundisi phambi Pope, yaye emva Pope ezimbini enye yeentsika ziye zachazwa emele inani "5". Pope ukusuka kwinto yokuba ulawule kamoya, ngokungafaniyo umlawuli, okanye ukujonga izinto kwindawo yonqulo lwembono, wena okanye wenza umgwebo.
umfazi akanayo uPhapha, ngokungafaniyo iincwadi (Tora), kunye unjingalwazi yokuziphatha ngesimilo ebantwini ubungcwele bakhe, kungakhathaliseki ukuba le ncwadi, oko kwatsala intembeko kwaye bamhloniphe kungqonge Papa feature Ndingathi.
Pope kwekhadi ikuyo inceba, intlonipho, ububele, nemfesane, ukuzithemba, efana nokugcina ingqeqesho kunye ezifana, ukuva ilizwi abantu, oko kuthetha ukuba kukho ubukho ukuba iziqu ebantwini. ikhadi
Pope ukuba umdlali iimvakalelo
Pope ngayo kwindawo entle Kucingelwa, nto leyo ethetha ukuba ubone izinto kwintsimi olubanzi ngayo kwaye uzolile xa ufumana sengqondo kwisimo esihle, kukho ingongoma ukuba ingaxuthi i flow elungileyo unayo. Kwimeko babini Ndicinga ukuba abantu kufuneka babe elungileyo ubuhlobo bakho. Abaninzi, elimela umbuso apho ngcembe abantu ababini yobudlelwane uqale ulwalamano lwakho luqhuba ukuba zikuthembisa.
ukuba intsikelelo banjani, xa abaninzi kwimeko yalo Pope kwekhadi, elinye iqela ekucingelwa ukuba siwazise ulwalamano kunye nawe, sifuna ukuba sikhulise bayabathanda ukususela ngoku. Ngoko siwazise welinye icala, yintoni na ukuqhubeka ukukholosa kulwalamano na amanyathelo ekufuneka athathwe yi bobabini ucinga umntu.
Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo, kunokuba elinye iqela Kuyathenjwa kunene kum ngenxa yenu, va intuthuzelo ukuba kwezinye iimeko, ezifana ubudlelwane umzalwana kunye nodadewabo. Ngentembeko ngoxa nokusabela kuphuhliso ubudlelwane uthando, iya kuzisa iziphumo inokuba bahle, adlulisele iimvakalelo ukuya kwenye sengqondo ecocekileyo.
ngasemva Pope Bound nokungathembani kwimeko kwindawo reverse iimvakalelo welinye iqela
Pope kaThixo abazikhundla bekumele ukuba kuthetha, kufuneka silumke kuba limela ezifana self-umxakatho. Kwimeko zombini Ndicinga ukuba abantu babe nangawathembanga ngayo kuwe. Kutshanje Musa amagama yayifafazeke ezifana buhlungu indlela yokuzingca kunye neqabane? Okokuqala kwakhona isimo sabo, nceda uzame ukungqinelana ngentembeko ngokubhekiselele elinye iqela. Ukuthatha umgama phakathi iqabane
, kukwabalulekile ukuba athobe iimvakalelo. Abantu zothando ezingabuyekezekiyo, iqabane akufanelekanga iimvakalelo zothando nxamnye nawe. Zama qha ngenxa ixesha ngoku le meko, okoko nje ukuba ukunqongophala kwenkqubela-phambili kwi ulwalamano, kubhetele ukuzama ngokuphandle ekhangela welinye icala elandelayo, usenokuba kubahlaziya kwakhona iimvakalelo zabo.